လှုပ်ရှားမှုများ | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
Category Archives: လှုပ်ရှားမှုများ
Posted on October 12, 2013	by bmta05
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာခ့်ခရိုင်အတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း ဆရာ၊ဆရာမများ ညီလာခံနှင့် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က မဲဆောက်မြို့ မယ်တော်ဆေးခန်း၏ သင်တန်း ခမ်းမဆောင်တွင် မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ အစည်းအရုံး (BMTA) မှ ဦးဆောင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ ထိုင်းနိုင်ငံဒေသ အသီးသီးမှ ပညာရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆရာ၊ဆရာမ စုစုပေါင်း ၇၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်သမားရေးရာဌာနမှ ဒေါ်မာမာဦး တက်ရောက်ပြီး ဂုဏ်ပြု အမှာစကား ပြောကြားပေးပြီး၊ ပညာရေးပြုပြင်ပြာင်းလဲမှု … Continue reading →
Posted in Action movement, လှုပ်ရှားမှုများ	| Tagged ပညာရေး	| Leaveacomment
To be able to understand the nature of team and the way to dealing with conflicts; BMTA provided two days training at Children Development Center ( CDC) school. Altogether 35 participants from migrant schools and partner CBOs such as Mae … Continue reading →
Posted in Action movement, လှုပ်ရှားမှုများ, သတင်း, English pages only, News	| Leaveacomment
Migrant education monitoring and evaluation meeting successfully finished
Posted on June 17, 2012	by bmta05
BMTA hold migrant education monitoring and evaluation meeting together with school heads and experiences teachers on 16th June 2012 at Children Development Center (CDC). BMTA, Burmese Migrant Worker Education Committee (BMEC), Migrant Education (ME), Education Working Group of CTDCEP and … Continue reading →
Posted in Action movement, လှုပ်ရှားမှုများ, English pages only, News	| 1 Comment
BMTA hold an education consultation team meeting for 2012-13 academic year
Burmese Migrant Teachers’ Association hold an education consultation team meeting with all education working groups in Tak Provence, Thailand for this academic year. All together 19 participants from education working group BMWEC, CCMC, ME, BMTA and education consultants. BMTA chairperson … Continue reading →
Posted in Action movement, လှုပ်ရှားမှုများ	| Leaveacomment
Teaching Skills Training for Grade7to 12 teachers
BMTA and Curriculum Project provided5days teaching skills training for high school or post ten teachers fro May 14 to 18, 2012.
Posted in လှုပ်ရှားမှုများ, English pages only	| Leaveacomment